Marwada Madaxweyaha Somalia oo deeq gaadhsiisay xarun wax lagu baro gabdhaha agoonta ah ( DAAWO SAWIRADA ) | Salaan Media
Marwada Madaxweyaha Somalia oo deeq gaadhsiisay xarun wax lagu baro gabdhaha agoonta ah ( DAAWO SAWIRADA )
Marwada Madaxweyaha Somalia Qamar Cali Cumar ayaa ka qeyb gashay sanadguuradii 1aad ee ka soo wareegatay aas-aaskii xarunta waxbarashada gabdhaha agoonta ee degmada Boondheere.
Sidoo kale marwada madaxweynaha ayaa dharka loogu talo galay labiska iskuulka iyo go’yaasha sariiraha loogu talo galay gaarsiisay xaruntaas ay gabdhaha agoonta ah wax ku bartaan.
Goobta xafladan ka dhaceysay oo ay ka soo qeyb galeen maamulka degmadaasi oo uu ugu horeeyo gudoomiyha degmada Boondheere C/llaahi Xirsi Wardheere (Istakiin) iyo qeybaha kala duwan ee bulsada degmada Boondheere ayaa waxaa lagu soo bandhigay heeso ka turjumaya qiimaha nabada iyo in la taakuleeyo caruurta agoonta ah.
Marwada madaxweynaha dalka marwo Qamar Cali Cumar ayaa gabdhaha agoonta ee xaruntaasi wax ka barata gacanteeda ugu qeybisay dharka uniformka iskuulka ah iyo go’yo loogu talo galay sariiraha.
Maamulaha xaruntan lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ah Nuurto Maxamed Cabdi ayaa sheegtay in xaruntan oo sanadkii hore la aas-aasay ay wax badan qabatay, isla markana ay ku guuleysatay in ay isku soo uruuriso gabdhaha agoonta ah ee degmadaasi ku dhibaateysnaa maantana ay u dabaaldageyso sandguradeedii 1aad.
Gudoomiyaha degmada Boondheere C/llaahi Xirsi Wardheere (Istakiin) ayaa sheegay in xaruntan furitaankeeda ay hirgeliyeen shacabka degmadaasi oo gacan ka helaya hay’ad Turkish ah oo dalka u joogto howlaha samafalka.
Marwada madaxweynaha Somalia marwo Qamar Cali Cumar ayaa sheegtay in caruurtan agoonta ah ay heysato dhibaato fara badan isla markaana looga baahan yahay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed in ay kaalmeeyaan caruurtan oo beri anfacaya mustaqbalka dalka, iyadoo kula dardaarantay dhamaan shacabka Soomaalliyed in caruurta agoonta ah la garab istaago.
“Qorsheyaasha dowlada waxaa ka mid ah in la caawiyo agoonta sidiina oo kale ah iyo dadka jilicsan si bulshada inteeda kale ay wax ula qeybsadaan” ayey tiri Marwada madaxweynaha dalka marwo Qamar Cali Cumar oo balan qaaday iney sii wadi doonto taageerada ay siiso agoonta Soomaaliyed.
Xaruntan xanaanada gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ayaa Waxaa la aas-aasay bishii July ee sanadkii hore,waxaana maanta ay ku beegneyd sanad guuradeedii 1aad ee ka soo wareegatay markii dhidibadda loo taagay.